ओलीको स्वेच्छाचारी र एकलौटी पनले पार्टी फुट्यो : पुर्णा जोशी
डोटी बडिकेदारको ब्यथा : बिधुत बिस्तार गर्ने ठेकेदार गायब, घामसंगै नेटर्वकपनि अस्ताउँछ
सशस्त्र प्रहरीद्धारा धनगढीका पन्त सम्मानित
कैलालीका सिडिओ र एसपीसहितको टोली सडकमा निस्किए, भन्छन्: ‘तपाईंको मास्क खै ?
रोटरी क्लबद्वारा धनगढी उपमहानगरपालिकालाई ३० हजार थान मास्क हस्तान्तरण
बैतडीमा बालुवा निकाल्ने क्रममा दुई महिलाको मृत्यु
कैलालीमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर घर हिँडेका व्यक्तिको बाटोमै मृत्यु
सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा युवा ब्यवसायी भट्ट सम्मानित
कञ्चनपुरको बेदकोटका सुरेन्द्र सीमानाकाबाट दैनिक कोरोना संक्रमित बोक्दै
डोटीको बडिकेदार गाउँपालिकाका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना
शनिबार, असोज ०९, २०७८ मा प्रकाशित
धनगढी : देशमा अहिले राजनितिक उतार चढावले चर्चा पाएको छ । करिब दुई तिहाई प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार ढलेर काग्रेंस नेतृत्वको सरकार अहिले छ । एमाले समेत फुटेर दुई पार्टी बनेका छन् । माधव कुमार नेपालले २० प्रतिशत सांसद र नेताहरु लगेर एकिकृत नेकपा समाजबादी पार्टी खोलेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एकिकृत नेकपा समाजबादी पार्टी पहिलो पार्टी भनेको छ । समाजवादी पार्टीमा १४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले सनाखत गरेका छन् । एमालेबाट छुट्टिएर अर्कै पार्टी पछिको राजनितिक यात्रा र कम्युनिस्ट राजनितिमा आएको यो उतार चढावका बिषयमा केन्द्रित रहेर एकिकृत नेकपा समाजबादी पार्टीकी केन्द्रिय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पुर्णा जोशी संग स्टेट सेभेन अनलाइनका सह सम्पादक दिनेश बिष्टले गरेको कुराकानी
मन्त्री ज्यु राजनितिले निकै उतारचढाव लियो के छ अहिलेको अवस्था ?
एकिकृत नेकपा समाजबादी पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ । कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नु राम्रो होइन तर बिगतबाटै पार्टी फुट्ने श्रृखंला चलिरहेका छन् । अहिलेपनि नेकपा एमाले फुट्नुको कारण नेतृत्वले पार्टीको बिधान बिपरित स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडी बढ्नुनै हो । त्यो स्वेच्छाचारी कदमको हामीले बिरोध गर्दा गर्दै गत पुस ५ गते पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी सर्मा ओलीले संसदनै बिघटन गरिदिनुभयो । सांसदनै बिघटन गरेर मुलुकलाई अस्तब्यस्त बनाउने काम गर्नुभयो । पार्टीमा महत्वपुर्ण योगदान गरेका नेताहरुलाई उहाँले किनारा लउँदै जानुभयो त्यतिबेलाबाटै कार्यक्रताहरुले कित्ता क्लियर गर्न थाल्नुभएको हो ।
यस्ता निरन्तर रुपमा रुपमा भइरहेका गलत काम सहन नसकेर पार्टी बिभाजनसम्म पुग्यो । माधव नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ता भएको छ । यसो हेर्दा पार्टी हिजो अस्ती खोलेको लागेपनि कार्यक्रताको उत्साहले पार्टी बषौँ पुरानो जस्तै भएको अनुभव भइरहेको छ ।
२०७५ जेठ ३ गते पार्टी अध्यक्षले बिघटन गर्दै नेकपा बनाइसक्नुभएको थियो । एमाले त त्यतिबेलानै सकिएको हो नी पछिल्लो समय अदालतले ब्युताइदिएको पो एमाले हो अहिले त । त्यसमापनि उहाँहरुले एउटा हिस्सालाई स्थान नदिएपछि छुट्टिनुपरेको हो । पार्टी दलाल पुजिवादीको घेराबन्दीमा थियो । समाजबादउन्मुख भएर पार्टी अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था नभएपछि हामी यो ठाउँमा आएका छौँ । यो आन्दोलनलाई गम्भिरतापुर्वक अगाडी बढाउने योजना अनुरुप देशभरबाट उत्साह छ, अब अरु कार्यक्रताहरुले जतिखेरपनि आउन मिल्ने छ ।
एमालेमा बसेर लामो राजनिति गर्नुभयो सुर्य चिन्हबाटै चुनाव जित्नुभो अहिले त्यही पार्टी छोड्नुपर्दा नराम्रो लागेन ?
नराम्रो त लाग्यो नी बर्षौँ पार्टीमा खारिएका हामी । आफुले बनाएको घर त्यो पार्टीको गुन, म प्रतिको योगदान उल्लेखनिय छ । तर म कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बाहिर गएको छैन । पार्टीको उद्देश्य अनुरुप काम भएनन् त्यही पार्टीमा बसेर काम गर्ने वातावरणपनि नहुँदा छोड्नुप¥यो । अहिले त्यो पार्टी छोडेकोपनि त्यति धेरै पिडा छैन । पार्टी जुन उद्देश्यले निर्माण बनेको हो त्यो उद्देश्य अनुसार काम भएनन् अब त्यो उद्देश्यलाई अर्को पार्टीबाट पुरा गर्छौँ साझा कम्युनिस्ट एकिकृत गरेर त्यो आन्दोलनलाई पुरा गर्ने छौँ । पार्टी छोड्दा दुख लाग्छ स्वभाविक हो तर सुर्य चिन्ह भनेर दुखमा डुबेर हुँदैन त्यही सुर्यलाई फेरी चम्किलो बनाउने गरी अब हामी काम गर्छौँ ।
तपाइहरुका नेता भिम रावल, घनश्याम भुषाल लगायत १० बुँदे सहमती गर्दै पार्टी एकतामा जानुभयो तपाइहरु चाहीँ किन अर्कै पार्टीमा ?
१० बुँदेलाई बुझ्नुपर्ने छ । ७५ जेठ ३ पछि हामी नेकपामा गयौँ । दुइटै अध्यक्षहरुले आ आफ्नो पार्टी बिघटन गर्दै अर्को पार्टी बनाउनुभयो । तल्लो तहमा छलफल बिनानै पार्टी बिघटन गर्दै नयाँ पार्टी बनाउनुभयो । त्यसमा बिवाद गरेनौँ । त्यसपछि त्यही पार्टी भित्र लडाई शुरु भयो । एक तर्फ बिधि बिधान मान्ने नेता त अर्को तर्फ शक्तिको पछि दगुर्दै बिधान नै नमान्ने नेता रहनुभयो । त्यतिखेरै मुलुक दुई कित्तामा उभिएको थियो । अहिले रुपमा पार्टी फुटेको देखिएको हो । आन्तरिक रुपमा पहिलानै फुटिसकेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी, एकलौटी पनले यो अवस्था आएको हो । अहिलेपनि जेठ ३ भन्नुहुन्छ । जेठ ३ मा आए सबै संगठन पुनर्जिबित भएनन् । किन केप ीओली र ईश्वर पोखरेल मात्रै आए अरु पुरानै संगठनमा किन आएनन् । उहाँहरुको एकलौटीपनकै कारण हामी त्यो पार्टीमा बस्न नसकेका हौँ । मुलुकभर समान उद्देश्य भएका कम्युनिस्ट कार्यक्रतालाई मिलाएर सिगंो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडी बढाउने उद्देश्यले हामी अर्कै पार्टी खोलेर लागेका हौँ ।
अनी हिजोका दिन तपाइ संगै रहेका दोश्रो तहका नेताहरु त १० बुँदे कार्यान्वयन भयो भनेर एमालेमै बस्नुभयो नी ?
यो १० बुँदेको अर्थनै छैन । १० बुँदेका नाममा मान्छेलाई अल्झ्याउने काम हो के यो । हाम्रो आन्दोलनलाई बहक्याउने काम मात्रै हो १० बुँदे भनेको । उहाँहरुलाई अल्झ्याएर १० बुँदे १० बुँदे भन्नुभयो उहाँहरु झुक्किनुभाछ भन्छु म त । पार्टी अलग भएको त थिएन नी दुई नेताको एकता भन्नुभयो के एकता गर्नु थियो र त्यसमा । खुरुखुरु अध्यक्षले जेठ ३ को बैठक बोलाइदिएको भए १० बुँदेको के काम । त्यसमा एकता भन्ने कुरै थिएन नी सहमती पो गराउनु थियो । अदालतले पुनर्जिबित गराएको एमालेको बैठक बसाएको भए भइहाल्थ्यो नी । २०७७ पुस यताका स्वेच्छाचारी कदम मेरा सबै गलत थिए भनेर माफ मागेको भए हुने थिएन र केपी ओली ति घटनाहरुलाई अँझैपनि नराम्रा हुन भन्न सक्नुभएन । जुन अध्यक्षले गल्ती दोहो¥याउँदै जाने अनी स्वेच्छाचारी ढंगले अघी ब्दै जान्छन् उहाँसंग बसेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्न भनेर हामी छुट्टिएका हौँ ।
१० बुँदे सहमतीका लागी माधव नेपालनै पठाउनुभाको हो नी ५ जना सदस्य अनी किन त्यही १० बुदे सहमती नमानेको त भिम रावल लगायत नेताहरु त माधव नेपालबाटै धोका भयो भन्नु हुन्छ ?
मधव नेपालले होइन नेपाललाई उहाँहरुले धोका दिनुभएको हो । शेर बहादूर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर अदालतसम्म धाएर हस्ताक्षर गरेर अन्तमा बिश्वासको मत दिनुहुन्न रे । एक नेतालाई यत्रो बिश्वास गरेर यत्रो आन्दोलनको जिम्मा दिइयो, पुस ५ यताको असंबैधानिक कदम बिरुद्ध उभिएर जसले आन्दोलन सफल पा¥यो, जसले दुई दुई पटक संसद पुनर्वहाली गरायो ति मान्छेहरुलाई भिरको टुप्पोमा पु¥याएर फर्केर हेर्दा साथ छोड्ने काम उहाँहरुले गर्नुभा हो । अदालतमा संसद पुनसर््थापना, शेर बहादूर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागी भिम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरुको हस्ताक्षर छ अन्तमा शेर बहादूर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो भनेर भिम रावलको साथ छोड्नुभयो ।
एमालेलाई कायम गराउन उहाँहरुले भुमिका खेल्नुभएन की माधव नेपाललाई छोड्नका लागी उहाँहरुले भुमिका खेल्नुभयो । केपी ओलीले खै उहाँहरुका कान कानमा गएर के भन्नुभयो अन्तमा बैगुनी मान्छे उहाँहरु हुन् । पदका लागी दोश्रो अध्यक्षका लागी माधव नेपालले अपेक्षा गर्नुभो भन्नुभाछ यो सरासर झुट हो । दशौँ महादिवेशनबाट हो नी नयाँ अध्यक्ष चुनिने हामीले केपी ओलीकै नेतृत्वको एमाले चाहेका हौँ के । पार्टीका संरचला जेठ ३ मा नफर्कने अनी हामी एमालेमा फक्यौँ भन्नुको तुक छैन ।
भिम रावल हाम्रो नेता हो सुदूरपश्चिमबाट अबको नेता भिम रावललाइनै मानेका थियौँ यत्रो आन्दोलनमा उहाँकै साथमा थियौँ नी हामी । उहाँहरुको पबित्र उद्देश्य थियो होला पार्टीलाई एक बनाउने तर केप ीओलीले खटाएका मान्छेबाट झुक्किनुपो भयो की । अब उहाँहरु गइसक्नुभयो माधव नेपाललाई छोडेर उहाँको अस्तित्व स्वूकार्न सक्नुभएन अब हामी अलग भइसकेका छौँ सबैको अस्तित्व सहितको पार्टी बनाउने भए आउनुस मिलेर जाऔँ भन्न चाहान्छु ।
उहाँहरु केही स्वार्थका लागी जानुभो की झुक्किनुभयो ?
स्वार्थ उहाँहरुका होलान मलाई चाही झुक्किएकै जस्तो लाग्छ । माधव नेपाल सहितको एकता भन्नुहुन्थ्यो अनी किन माधव नेपाललाई छोडेर आफु मात्रै जानुभयो । जेठ २ भन्नुभाछ जेठ २ मै एमाले फर्केको भए लेखराज भट्टले म ईन्चार्ज हुँ भन्नु हुन्थेन होला । जिल्ला जिल्लामा नेकपा हुँदा समानान्तर कमिटि बनाएकाहरुनै अध्यक्ष भइरहेका छन् । यो १० बुँदे सबै भ्रम छर्ने कुरा हुन हामी भ्रममा पर्दैनौँ । पार्टीको प्रजातान्त्रीक करणलाई केपी ओलीले निजिकरण गरिसक्नुभाछ उहाँसंगका कसैको खैरियत छैन अब उहाँ बाहेक खै हाम्रा नेताहरु के प्रलोभनमा पर्नुभयो । केपी ओलीको जि हजुरी गर्नेहरु मात्रै उहाँसंग रहन्छन त्यस्तै महादिवेशन प्रतिनिधीहरु जानुहुन्छ उहाँको मान्छे बाहेक अरुले महादिवेशन पनि जित्दैनन् ।
अनी सुदूरपश्चिममा भिम रावल एक्लिएकै हुन् ?
त्यस्तो देखियो उहाँकै जिल्ला अध्यक्ष शेर बहादूर कुँवर हामीसंग हुनुहुन्छ । नेता एक्लिदाखेरी हाम्रोपनि चित्त दुख्छ त्यो क्षमता राख्ने नेता एक्लिनुहुन्न । माधव नेपालले भिम रावललाई जति अवशर दिनुभयो त्यती केपी ओलीले दिनुहुन्न । हामीले उहाँलाई जति सम्मान गरेका थियौँ केपी ओलीका कार्यक्रताले उहाँलाई त्यो सम्मान गर्ने छैनन् । उहाँ फेरीपनि हाम्रै टिममा आबद्ध हुन आउनुपर्छ ।
त्यतिबेला माधव समुह सुदूरपश्चिममै सबैभन्दा बलियो देखिएको थियो भिम रावलका कारण भन्थे अहिले रावलसंग ४ जना मात्रै रहे बलियो को रहेछ ?
बलियो बैचारिक समुह भयो । ९ औँ महादिवेशनमापनि यो समुहको नेतृत्व माधव नेपालले गर्नुहुन्थ्यो । प्राबिधिक कारणले उहाँ पराजित हुनुभयो । भिम रावलदेखी घनश्याम भुषाल हामी संगै थियौँ । भिम रावल अध्याधिक मतले जित्नुभाको हाम्रै मतले हुन उहाँले हामीसंगै हुनुपथ्र्यो तर उहाँ उतातिर लाग्नुभयो । हामी एमालेको आन्दोलनलाई सार्थक बनाउन हिँडेको मान्छे हो । नाम र सुर्य चिन्हसंगको मोह समेत हामीले त्याग्यौँ । हामी जनतालाई के कारण अर्कै पार्टी बनायौँ भनेर प्रस्ट भन्न सक्छौँ त्यस कारण भिम रावलले हामीसंगै आउनुपर्छ ।
पार्टी बलियो बन्छ त तपाइहरुको ?
हिजोका दिन जस्तो कार्यक्रता जनतालाई सम्झाउन गाह्रो हुने अवस्था छैन । हरेक घरमा मास्टर गरेका मान्छे छन् । हाम्रा दस्ताबेज उहाँहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ । भोली पार्टीलाई राम्रो बनाउने कुरा हाम्रो बिधान, हाम्रा काम राम्रा हुनुपर्ने हो । बर्ग हितका मुद्धानै उठेनन् समाजबादमा जाने यात्रा दलाल पुजिवादमा गएर अड्क्यो औषधीमा घोटाला गर्ने ब्यक्तीलाई कार्वाही भएन यस्तो अवस्थाबाट हामी मुक्त भएका छौँ । त्यो हामीले बनाउन सके हामी बलियो बन्छौँ । संसद बिघटन भाछ वा केपी ओलीका डमी बनाएर जय जयकार छ, हामी यस्तो गलतलाइपनि सही भन्दैनौँ गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्छौँ ।
सरकारमा टिक्नलाइमात्रै समाजबादीमा खुले भनेर टिप्पणी हुन थालेका छन् नी मन्त्रीकै लागी समाजवादीमा लाग्नुभा हो ?
यो समयक्रमले देखाउँदैछ । दलनै ठुलो भइसकेपछि सरकारमा त जाने नै भयो । म समाजवादीको केन्द्रिय सदस्य बन्दा एमाले दलको नेताले कार्वाही गर्न सक्थ्यो म पद दाउमा राखेर खुलेको मान्छे हुँ । केही पाउनका लागी लागेको होइन भुमिकाले पाउला । त्यो मन्त्री खानका लागी सरकार टिकाउनका लागी भन्ने कुरा गलत हो हामी सिद्धान्तको राजनिति गछौँ ।
सरकारको नेतृत्व गर्छ त समाजवादीले ?
अहिले दुइवटै पार्टीको सरकार रहन्छ तेश्रो पार्टी सरकारमा आउनु परेन अहिले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन बारे छलफलनै भएको छैन । त्यो राजनितिक सहमती हो । सुदूरपश्चिममा हामी स्पस्ट बहुमतमा छौँ काग्रेंस सरकारमा आउनु परेन । संघमा काग्रेंसको नेतृत्व भएपनि सबै प्रदेशमा भागबण्डा चाहिन्छ भन्ने छैन ।
तिङ्कर जोड्ने घोरेटो बाटो यही वर्ष सम्पन्न गरिने
राष्ट्रिय भूमि आयोगले माग्यो सुदुरपश्चिमका तिन सहित २८ जिल्लाका सुकुम्बासीसँग जग्गा प्राप्तिकालागि निवेदन
कैलालीमा ढुङ्गा बोकेको ट्याक्टरमा लुकाई लगेको अबस्थामा सालको काठ बरामद
कैलालीमा बन्चरो प्रहार गरी एक वडा अध्यक्षको मोटरसाइकल तोडफोड
कैलालीमा मोटरसाईकलको ठक्करबाट महिलाको मृत्युपछि पुर्वपश्चिम राजमार्ग अबरुद्ध
बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विकमाथि हातपात
सुदूरपश्चिम वाम लोकतान्त्रिक संयन्त्रको संयोजकमा सोडारी